के श्रृंखलाले मिस वर्ल्डको उपाधी जित्लिन् ? ज्योतिषशास्त्रले के भन्छ ? (भिडियोमा) | Kendrabindu Nepal Online News
२० मंसिर २०७५, बिहीबार १८:१६
काठमाडौं । मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा अन्ततः मिस वर्ल्डको अन्तिम ३० अर्थात फाइनल चरणमा प्रवेश गरेकी छन् । चीनको सानियामा जारी ६८ औं मिस वर्ल्ड २०१८ मा दुई वटा अवार्ड जितेकी छन् ।
श्रृंखलाले ‘ब्युटी विद पर्पस’ र ‘मल्टीमिडिया अवार्ड’ आफ्नो हात पार्दै १ सय १७ सुन्दरीहरुलाई पछि पारेकी हुन् । मल्टिमिडिया अवार्डको लागि नेपाललाई मेक्सिको र केन्याले टक्कर दिएका थिए । जसमा श्रृंखलाले धेरै भोट पाएर मल्टिमिडिया अवार्ड आफ्नो पोल्टोमा परेकी हुन् ।
५ फिट ७ इन्च अग्ली श्रृंखला हेटौडामा जन्मिएकी हुन् । उनी राजनितिक माहोलमा नै हुकिएकी हुन् । अर्थात उनको बुवा आमा नै राजनीतिमा आबद्ध छन् ।
श्रृंखलाले स वर्ल्ड २०१८ जित्ने सम्भावना बलियो छ । उनको अहिलेसम्मको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ । उनले अहिले सम्म धेरै कुराहरुमा आफ्नो प्रतिभा देखाएर आफूलाई अब्बल साबित गरिसकेकी छिन् ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार उनले नेपालमै मिस वर्ल्डको ताज लिएर आउने कुरा भने त्यति सहज नभएको ज्योतिषाचार्य मनिष सापकोटाको भनाई छ । यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन भने डिसेम्बर ८ तारिखसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ । थप भिडियोमाः
miss nepal, miss nepal 2018, Miss World 2018, nepal, Shrinkhala Khatiwada., मिस वर्ल्ड, श्रृखंला खतिवडा
Prevमधेशलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने सीके राउत पूर्पक्षका लागि जेल चलान
ईपीएल क्रिकेटको ट्रफी सार्वजनिकNext